तपाइँको दिनदिनै निद्रामा बर्बराउन बर्बराउने बानी त छैन ? – Khabar Silo
तपाइँको दिनदिनै निद्रामा बर्बराउन बर्बराउने बानी त छैन ?
काठमाडौं हामीमध्ये केहीलाई निद्रामा कुरा गर्ने बानी हुन्छ । राति सुतेका बेलामा यसरी बर्बराउनुलाई सोम्नीलोकी भनिन्छ ।यो कुनै रोग होइन तर यसरी निद्रामा बर्बराउँदा तपाईंसँगै सुत्ने मानिसलाई डिस्टर्ब चाहिँ हुन्छ ।निद्रामा बर्बराउने मानिसले निद्रामै अचम्मको व्यवहार देखाउँछ र उसले बर्बराएको प्रस्ट नबुझ्न पनि सकिन्छ । यस्ता मानिसहरू लामो समय चाहिँ बर्बराउँदैनन् । आधी मिनेट जति बर्बराएर उनीहरू चुप लाग्छन् ।
विद्यालय जाने बच्चाहरूमाथि गरिएको एक अध्ययन अनुसार तीनदेखि दश वर्षका बच्चाहरूलाई निद्रामा बर्बराउने बानी हुन्छ । तर दश प्रतिशतभन्दा कम बच्चा दिनदिनै राति बर्बराउँछन् । ठूलो हुँदै गएपछि यो समस्या समाधान हुँदै जान्छ । यसका लागि केही गरिरहनुपर्दैन ।निद्रामा बर्बराउनुका धेरै कारण हुन सक्छन् । तपाईं धेर तनाव लिनुहुन्छ, डिप्रेसनको शिकार हुनुहुन्छ, रक्सी पिउनुहुन्छ र पर्याप्त सुत्नुहुन्न भने निद्रामा बर्बराउने समस्या आउँछ ।
तपाईंको परिवारमा कसैलाई निद्रामा कुरा गर्ने बानी छ भने तपाईंलाई पनि हुनसक्छ । यसका साथै तपाईंका
मातापितामा यो समस्या थियो भने आनुवंशिक रूपमा यो सर्न सक्छ ।तपाईंलाई निद्रासम्बन्धी रोग छ भने पनि बर्बराउनुहुन्छ । चिकित्सकलाई देखाइहाल्नुस् ।
नडराउनुस्, यो कुनै रोग हैन । तर दिनदिनै निद्रामा बर्बराउन थालनुभयो भने चाहिँ मनोविज्ञानवेत्तासँग सम्पर्क गर्नुस् ।मानसिक तनाव लिने र अत्यधिक सोच्ने बानी हटाउनुभयो भने पनि यो समस्या समाधान हुन्छ । मनलाई शान्त राख्नका लागि नियमित योग र ध्यान गर्नुस् । अनि आफूसँग सुतिरहेको मानिसलाई आफूले बर्बराउनेबित्तिकै उठाइदिन भन्नुभए हुन्छ ।
हाम्रो समाजमा यी यस्ता घटनाहरु प्राय देखिरहेका नै हुन्छौ जहा मोटो मान्छेलाई कति मोटो भन्ने अनि जो दुब्लाृे छ त्यस्तालाई लुरे भनेर जिस्काउने । दुव्लो भएका युवा युवती विवाह पछि मोटाएका हामीले धेरै देखेका छौं । अझ साथी भाईहरुबीच त बिहेपछि त मोटाइस् नी भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरिएको सुनिन्छ । विवाहपछि किन मोटाउछन् त पातला […]
Posted on June 6, 2021 June 6, 2021 Author khabar silo
यस्ताे चमत्कारी विरुवा जुन घरको यो दिशामा लगाउनु भयाे भने धनको कमि कहियै हुदैन ! हरेक मानिसको भाग्यमा कुनै कुनै माध्यमबाट धन सम्पत्ति कमाउने योग बनिरहेको हुन्छ । योगको आधारमा मानिसले मेहनत गर्छन् र मेहनत अनुसार कसैलाई राम्रो र सजिलो हुन्छ भने कसैलाई क`ष्ट हुन्छ । सजिलो र गा`ह्रो भनेको मनिसको आफ्नो पूर्व जन्मको कर्म […]
Posted on September 5, 2020 Author khabar silo
आलुलाई तरकारीको राजा मानिन्छ । जुन तरकारी सँग पनि मिल्ने र सहज उपलब्ध हुने भएकाले कतिपय मानिसलाई पनि आलु भनेर व्यङ्ग्य गर्ने गरिन्छ । तर, तपाईंलाई पत्यारै लाग्न नसक्ने आलुको प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दैछौं – एउटा आलुको फोटो नै १२ करोड रुपैयाँमा विक्री भएको छ । एक आइरिस सेलिब्रेटी फोटोग्राफरले आइरिस आलुको फोटो १२ करोड रुपैयाँमा […]
अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने उद्देश्यसहितको उजुरीमाथि छानविन